Keeniyaan Weerarri COVID – 19 Baayyannaan Kutaalee Bulchiinsaa Shan Keessaa Nami Akka hin Baane Ajajde
FILE - A boy walks in front of a graffiti promoting the fight against the coronavirus disease, in the Mathare slums of Nairobi, Kenya, May 22, 2020. Kenya reimposed some COVID-19 lockdown restrictions on March 26, 2021.
Keeniyaan dhiyeenya weerarri Kooronaa Vaayires yaaddessaa dhufnaan magalaa guddoo biyyattii dabalatee kutaalee bulchiinsaa shan keessaa name akka hin baane ajajuu beeksiste
Ji’a Bitootessa kana keessa Keeniyaatti weerarri Vaayressii Kooronaa ballataa dhufuu mootummaan Keeniyaa beeksise. Prezdentiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa sababa weerarri vaayresii kanaa danuun dabaleef Naayroobiin dabalatee kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa shan keessaa nami gara kutaa bulchiinsa kaaniitti akka hin qaxxaamurre dhorkanii jiru.
Dubbii isaaniitiin ka eeeran, weerarri kooronaa erga biyyattiitti mullatee as dhiyeenya warri dhibee kanaan qabamuun mirkaanaaye dhibbeentaan 70 ol, jiraattota, Naayroobii, Kaajiyaadoo, Machaakoos, Kiyaambuu fi Nakuuruu ta’uu mirkaneessan. Kanaaf kutaaleen kun bakka mandhee dhibee ta’uu, kanarraa ka ka’es ammaan achi kutaalee amma eeraman shanan keessaa gara kutaa bulchiinsa keeniyaa birootti geejjibaa kamiinuu qaxxaamuruun dhorkaadha, jedhan Keeniyaattaan.
Keeniyaattaan, kutaalee bulchiinsaa kana keessatti halkan sa’aatii lama booda socho’uun dhorkaa ta’uu, manneetiin dhugaatii fi nyaataa tajaajila isaanii maammiltoonni bakka jiran qofaatti geessuun akka hojjetan eeranii, manneetiin waaqeffannaa amantii gara garaas haga ajaji kaan bahutti cufaa tahuu mirkaneessan.
Gama biraan manneetiin barnootaa dhiyeenya banamanis warra qormaata biyyaalessaa fudhatuun ala barattoonni barnootaan qaamaan argaamnii baratan akka dhaabanis ifoomsanii jiru.
Wal gaheen kaabinee mootummaa biyyatti ka warra dhimmi nageenyaan ala dhaabbachuusaa dubbatanii, lammileen biyyattii akka gorsa ogeeyyii fayyaatti dhibee kana akka ofirraa eegan gaafatan.
Keeniyaattaan dhibeen vaayresii kooronaa amajjii haga gurraandhala darbee kana guyyaattii namoota 3 ajjeesaa akka ture dubbatanii amma garuu jalqaba ji’a bitootessaa kaasee Keeniyaa keessatti guyyaatti nami torba Vaayressii Kooronaan lubbuunsaanii darbaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Imaltoota idla addunyaa gara keeniyaa dhufan ilaalchisee Prezdent Keeniyaattan, imaltoonni, akkuma duraanii waraqaa qoranaa COVID – 19rraa bilisa tahuu qabaachuun akka biyyattii seenuu danda’ani kan dubbatan.